Shirweyne dib loogu u eegayo Qorshayaasha Puntland sanadaha 2014-2015 oo maanta ka furmay Garoowe”sawiro” – Radio Muqdisho
Shirkaan waxaa goob joog ahaa Madaxweynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, dhammaan wasiirada iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha Puntland iyo sidoo kale madaxda hay’addaha kale ee maamulka.
Madaxweynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo furitaanki shirweynahaan khudbad dheer ka jeediyey ayaa sheegay in lagama maar maan ay tahay in shacabka Puntland maanta loo soo bandhigo waxa sanad kadib u qabsoomay xukuumada.
”Maanta waxaan joogna dhammaadka sanadka 2014, waxana waajib oo muhim ah inaanu isla xisaabtano dadkuna ay nala xisaabtamaan wixii aan balan qaadnayna aanu sheegno waxa ka qabsoomay, wixii aan ka qabsoomin iyo sababta ay u qabsoomi waayeen haday jiraan”Ayuu yiri Mmadaxweyne Gaas.
”Wax badan baa dadka Puntland u balan qaadnay horumar baan u balan qaadnay iyo sidookale wax qabad dhab ah oo kala duwan ayaanu u balan qaadnay mid caafimaad mid waxbarasho mid nabad gelyo sidookale waxaanu balan qaadnay inaanu la dagaalano burcad badeed, tahriib iyo xagjirnimo”Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
”Dadka waa in ay u cadahay dawladnimada, taas ayaana keenaysa korna u qaadaysa dawladnimadeena iyo ku qanacsanaanta dadka ee dawladooda waxaas oo dhan ayaanu balan qaadnay, maanta marka waxa nalaka rabaa si cad dadka Puntland in aanu ugu sheegno”Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay in horumar la taaban karo laga gaaray mudada sanadka ah islamarkaana uu rajaynayo in sanadka soo socda horumarka hada lagaaray mid ka wanaagsan la gaaro si shacabka Puntland kalsooni buuxda ugu qabaan dawladooda.